Biodiversity Vision - SN
Maonero edu akasiyana siyana akajeka:
⚫ simbisa zvipenyu
nematanho ekongiri ...
Izvo hazvina kukwana kutora mamwe ekunzwa matanho akanaka seakasarudzika zvikamu zvidiki zenzizi kana kuronga ivhu iro riine zvishoma zvimwe zvinoshandiswa. Tinofanirwa kupa / kutenga nzvimbo yekugadzira green corridors kubva kune yakaderera yakakwira kune yakakwirira urefu, kubva kuchamhembe kusvika kuchamhembe - s.k. kufambisa kufambiswa kwemarudzi pamberi pehondo yakasunungurwa kurwisanisa nekushanduka kwemamiriro ekunze - nezvimwe.
⚫ maererano nesainzi
kwete zvematongerwo enyika ..
Inofanira kunge iri kukunda-kuhwina mamiriro. Yakawanda nzvimbo yakagoverwa kumusango kuti ibatsirwe nezvipenyu zvese kusanganisira vanhu.
Kuvhara mari kunoenderana nerematongerwe enyika kana kune mapurojekiti akatobhadharwa mari kana zvisingaite pfungwa hazvifanirwe kuitika.
Izvo zvatova pachena kuti masayendisiti mazhinji ndeekufunga kuti isu hatisi kuita zvakakwana kuponesa zvipenyu. Nekudaro ivo havangave vese vanobvumirana pane iyo chaiyo chirongwa chekuita. Izvo zvine musoro kuisa zviwanikwa mumhando dzakasiyana dzakasiyana dzemapurojekiti. Imwe chirongwa chakadai kuvaka matumba madiki nezvitsuwa kupa shiri shanduko kuti dzidzokere uye kubereka.
Haisi mubvunzo wekuonekwa uchiita chimwe chinhu asi kunyatso kuponesa izvo zvidyarwa nemhuka.
⚫ uye kuzvipira
2% yeGDP ...
Dzimwe nyika dzinayo sechinangwa chavo kushandisa 2% yeNational Income (Gross Domestic Chigadzirwa) mukudzivirira. Kuchengetedza zvakasarudzika zvepasi hazvina kunyanyo kukosha. Isu tinoti 2% yeiyo GDP yekuvandudza nekudzivirira kwezvisikwa.
Hatigone kumirira, saka chirongwa chinofanira kuve nekukurumidza, pane kuwedzera zvishoma nezvishoma mari yekushandisa pamusoro pehuwandu hwe x hwemakore.
Kuti uverenge kusvika kune iyi 2% chinangwa, inofanirwa kuve chirongwa chinozivikanwa uye kwete pamusoro pezvematongerwo enyika, sezvataurwa pamusoro apa.
Ndokumbirawo ubaya pane miseve diki ˅ ˄ pamusoro kurudyi kuratidza kana kuvanza mamwe mavara ⬆️
Share our link with everybody www.biodiversity.vision